Netanyahu oo bilaabay inuu DHIBCO ku raadiyo been uu ka sheegayo arrimaha Xajka | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Netanyahu oo bilaabay inuu DHIBCO ku raadiyo been uu ka sheegayo arrimaha...
Netanyahu oo bilaabay inuu DHIBCO ku raadiyo been uu ka sheegayo arrimaha Xajka
(Tel Aviv) 21 Feb 2020 – Laba todobaad uun kahor doorashada Israel, RW Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inuu dhaqan gelinayo qorshe lagu bilaabayo duullimaadyo toos ah oo isku xiraya Tel Aviv ilaa Maka, Saudi Arabia.
Ninkan ayaa warkan ku sheegay Facebook waloow la tirsan daqiiqado yar uun kaddib markii la daabacay.
Warkan oo ku wada qornaa Carabi iyo Cibraani ayuu Netanyahu ku yiri sidatan: “Waxaannu ka shaqaynaynaa hirgelinta duullimaad toos ah oo xiriirinaya Tel Aviv iyo Maka, si loogu faa’iideeyo Muslimiinta soo xajinaysa,” waxaa qoraalka soo xigtey Maariv.
Tillaabadan ayaa loo qaatay mid uu ninkan xag-jirka ihi ku doonayo inuu kusoo jiito codadka Carabta ku hoos nool Israel kahor doorashada.
Israel oo ay guud ahaan ku nool yihiin 9 milyan oo qofood ay ku nool yihiin 20% Carab ah, kuwaasoo iskugu jira Muslimiin, Masiixiyiin iyo Duruusiyiin, waxayna ka cowdaan in loola dhaqmo sidii muwaadiniin dabaqad 2-aad ah.
Siyaasiga Carab-Muslim-ka ee hoggaamiya Arab Movement for Change ayaa cambaareeyay tillaabada Netanyahu, oo uu ku tilmaamay “Bibi-lie.”
“Ma jiraa wax ka liita Netanyahu oo isku deyaya inuu been ku kasbado cududka xujeeyda Carabta?” ayuu yiri sida ay soo xigatey Jerusalem Post.
Israel ayaa doorashada u dareeraysa bisha Maarso 2-deeda, waana markii 3-aad sanad gudihii kaddib kuwii Abriil iyo Septembar oo bareejo ku dhamaaday, iyadoo doorashadan ugu dambaysa loo arko afti loo qaadayo Netanyahu oo ka badbatay siyaasadda Yuhuudda.
Sucuudiga ayaa maalin dhowayd caddeeyay inaysan wax xiriir ah oo toos ah la yeelan doonin Israel inta meel laga saarayo arrinta reer Falastiin, taasoo warka Netanyahu been ka dhigaysa.
Previous articleSidee FOREX uga faa’iidaysan kartaa adigoo aan ku fashilmin (Akhri afartan qodob)
Next articleDF Somalia oo rukhsaddii u diidey dayuurad tikitkeedu rakhiis yahay oo ay Kenya leedahay (Sababta)